Home Wararka Puntland oo ka hadashay iscasilaada madaxda guddiga doorashada
Puntland oo ka hadashay iscasilaada madaxda guddiga doorashada
Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Dimuqraadiyeynta Puntland ayaa sheegtay iscasilaadda Madaxda Guddiga Doorashooyinka in aysan saameyn ku yeelan doonin in laga guul gaaro hirgelinta iyo dhammeystirka Doorashooyinka hal qof iyo hal cod.
Wasaaradda arimaha gudaha ayaa guddoomiye Guuleed, Ku xigeenkiisa Jaamac iyo dhammaan Xubnaha Guddigaba uga mahad celisay hawl karnimadii horseeday qabsoomidda doorashooyinkii horudhaca ahaa ee Ufeyn, Qardho iyo Eyl.
Wasaaraddu waxay sheegtay qorshaha dhammeystirka Doorashooyinka Degmooyinka dhiman inuu u soconayo sidii loogu talo galay.
Dhinaca kale guddiga doorashooyinka Puntland oo shalay kulan degdeg ah isugu yimid ayaa doortay guddoomiye kumeel gaar ah iyo ku xigeen, waxayna sheegeen in shaqada guddigu sii socon doonto.
Previous articleXiisada colaadeed ee magalaada Baladweyne oo ka sii daraysa
Next articleNatiijo malaga filan karaa shir aan horay looga soo heshiin qodobada la isku haysto
Xiritaanka shirka GWQ oo dib loo dhigay “Qodoba aan weli xal...
Maxaa ka dhacay Cisbitaal Martini Maxaasa weli ka Socda?